Haintrano nahatsiravina tany Mananjary : trano 615 kilan’ny afo, 4 000 traboina | NewsMada
Haintrano nahatsiravina tany Mananjary : trano 615 kilan’ny afo, 4 000 traboina
Par Taratra sur 25/10/2017
Vokatry ny haintrano goavana, nitranga tao Anosiakoho sy Ankadirano, distrikan’i Mananjary, afakomaly alina, trano 600 mahery hotohoton’ny afo, manodidina ny 4 000 ny mponina traboina.
Olona nanendy ovy tao amin’ny trano iray no nitarika ny firehetana satria nafana be ny menaka ka nahazo ny tao an-trano ary tsy voavonjy intsony, araka ny fanazavan’ny raim-pianakaviana iray nijoro vavolombelona. Nijoalajoala tsy nisy toy izany ny afo taorian’izay satria niitatra hatrany ny firehetana ka nahazo ny tanàna rehetra tao Ankadirano sy Anosinakoho samy ao anatin’ny distrikan’i Mananjary. Raikitra ny fifanjevoana teo amin’ireo niharam-boina satria samy nanao izay ho afany tamin’ny famonjena ny entany izy ireo, saingy lasa lavenona noho ny ankamaroan’ny entana. Trano hazo rahateo ny ankamaroan’izy ireo ka isan’ny nanamora ny firehetan’ny afo izany. Antapitrisany maro ny tentimbidin’ny entana kilan’ny afo. Tonga ara-potoana ihany ny fiaraben’ny kaominina hamono afo, saingy tsy nahafehy ny afo satria fiara tokana ihany ka tsy afa-nanao na inona na inona. “Tsy mbola nisy haintrano goavambe toy izao teto Mananjary raha tsy tamin’ity (afakomaly io)”, hoy hatrany ny fanazavan’ireo olona sasany nahita ny fitrangan’ny loza. Tsy nisy ny aina nafoy fa nisy kosa ireo naratra tamin’ny famonoana ny afo. Eny ankalamanjana sy amin’ny sekoly ireo traboina no mipetraka ary tsy misy horaisina intsony. Manoloana izany indrindra, manao antso avo amin’ny fanjakana izy ireo mba hijery akaiky izao fahavoazana izao. Tokony homena fiarabe mpamonjy voina koa ny mponina ao Mananjary hanampy ilay fiarabe iray an’ny kaominina satria ny trangan-javatra toy izao no tena mampanahirana ny mponina, raha ny fanazavana hatrany.
Tohivakana ny haintrano…
Fa trano 60 tafo koa indray kilan’ny afo tao Antananavahy Miandrivazo, afakomaly alina ihany taorian’ny fanafihan-dahalo niseho tany an-toerana. Antapitrisany koa ny fahavoazana tamin’ity haintrano ity noho ny hetraketrak’ireo malaso.
Tsikaritra fa nanao tohivakana ny haintrano ny faran’ny herinandro teo. Isan’izany ny tao Besalampy, trano manodidina ny 450 tafo indry levon’ny afo. Teo koa ilay tany Maevatanana, doro tanety nataon’olon-tsy fantatra no nitarika ny fahamaizana trano 200 mahery. Anarivony maro ireo olona traboina vokatr’izany.
Trano fivarotana miisa enina koa indray levon’ny afo tao amin’ny fokontany Andranovelona, kaominina ambanivohitr’i Fihaonana, afakomaly tolakandro. Niainga tao amin’ny trano fivarotana iray ny afo. Na teo aza fijoalajoalan’ny afo, voafehy ihany izany noho ny fiaraha-mientana teo amin’ny fokonolona sy ny zandary tamin’ny famonoana ny afo. Tsy misy afa-tsy ny fahamailoana ihany amin’izao satria tandrevaka kely monja dia ahitan-doza toy izao.